हिमानी पनि टिकटक मा, छमछमी नाच्दै - "जहाँ गए नि किन लाग्छ मलाइ तिम्रै माया"
AnandNepal 112 days ago
underwear 110 days ago
AnandNepal 108 days ago
Miss Universe - Manita Devkota selected Top5from Asia pacific
यि सच्चा मिस नेपाललाइ कसले लुकायो ?
राजतन्त्र फिर्ता ल्याउने दोष नलागोस् .. ;)
बिलासी गाडी बेचेर सरकारी ढुकुटीमा ..
प्रेमको लागि देश छोड्ने, धर्म छोड्ने, श्रिमति ... सबै छोड्ने .. डाक्टर साप
वीरेन्द्रको सम्झनामा - चप्पल लगाएर सिंहदरवार छिरेका केपी ओली
‘हत्या आरोपी’ मेयर जेलबाट छुटेको खुशीयालीमा सार्वजनिक विदा
Visitor is reading हिमानी पनि टिकटक मा, छमछमी नाच्दै - "जहाँ गए नि किन लाग्छ मल
Visitor is reading applying to Australian Colleges
Visitor from NL is reading Fung Wah (Chinatown) bus accident
Visitor is reading any nepali community in pittsburgh?????
Visitor is reading One Bedroom in Somerville, Near Sullivan satation.
Visitor is reading calculus: help needed
Visitor is reading needaroom mate in Irving
Visitor is reading Namaste Kathmandu - Building Nepal one step atatime!
Visitor is reading Everest Radio vs Radio Yuva ( dallas ko station bich ghamasa
[VIEWED 2104 TIMES]
Posted on 06-08-20 9:52 PM Reply [Subscribe]
हिमानि टिकटकमा छोरीहरुसंग छमछमी नाच्दै - "जहाँ गए नि किन लाग्छ मलाइ तिम्रै माया"
हिमानि पुत्रि पुर्णिका शाहले एक टिकटक भिडियो शेयर गरिन - "गुराँसको फेद मुनि सम्झनाको छायाँ।" बोलको गितमा नाच्दै गरेको । भिडियोमा आमा हिमानिका साथमा दुइटै छोरिहरु पुर्णिका र कृतिकले नाचेका छन । यो भिडियो शेयर गर्दै ट्विटर प्रयोगकर्ता पवनवर्शा शाहको भनाइ थियो - परिस्थिती अनुसार यसरी रमाउन जाने सहज हुन्छ जिन्दगी #पुर्व युवराज्ञी हिमानी शाह र छोरीहरु।
लकडाउनको बेलामा घरमा नै बसेर गर्न मिल्ने कार्यहरुमा यसरि नाचगान र त्यस्तै भिडियोहरु शेयर गर्नु प्रमुख भएको छ। यहि बेलामा आएको यो पुर्वराज परिवारको टिकट्कले सामाजिक संजालमा तहल्का मच्चाएको छ । पुर्व राज परिवरको नाचगान प्रतिको लगाव लकडाउनको बेलामा मात्रै नभएर - यस अघि पनि देखिएको थियो।
टिकटक भिडियोको बारेमा आएका प्रतिक्रियाप्रति एक प्रयोगकर्ता भन्छन - पुर्व अधिराजकुमारिलाइ साधारण मान्छे भएर जिउन दिए भैहाल्यो नि .. जावो एउटा टिकटक बनाउँदा पनि कति हल्ला गर्ने ?
Posted on 06-10-20 7:36 PM [Snapshot: 370] Reply [Subscribe]
Posted on 06-12-20 12:02 PM [Snapshot: 602] Reply [Subscribe]
यसो इन्दिरा जोशी ले बारुली कम्मर हल्लाको भिडियो पनि राखौँ न प्रभो, बडा सेक...., आइ मीन शुशील महिला लाग्छिन.
Posted on 06-14-20 3:26 PM [Snapshot: 1024] Reply [Subscribe]
इन्दिरा जोशिले .. मिस युनिभर्स नेपाल संचालन गर्ने रे ।
@underwear तिन्को पनि पालो आउँछ ;)
अहिले पारस हिमानि भनेर सिक भएका रहेछन ..
५ बर्ष अघि कन्निकाले छोडिन ..
अहिले सोनिकाले पनि छोडेपछि एक्लिए जस्तो छ ।
पारसको केस पनि .... परिवारले माया नगरेको हो कि के हो बुझ्नै गाह्रो .. घर भित्रन नदिने अनि आँफै सप्रन्छन त।